Bekuyini ukushisa okukhulu kakhulu eSpain? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Manje njengoba izwe lonke belibhekene nokushisa kokuqala konyaka futhi libhekene namazinga okushisa angaphezu kwama-40 degrees, Yisikhathi esihle sokukhumbula ukuthi kube yini ukushisa okuthe xaxa izwe elihlangabezane nakho kumarekhodi.
Kuyathakazelisa ukuthi okubi kakhulu kuze kube manje bekungunyaka owedlule, ngoba akuhlalanga lutho futhi kungapheli izinsuku ezingama-26. Ngalezo zinsuku, i-mercury yakwazi ukudlula ama-degree angama-40 ezindaweni eziningi zaseSpain ikakhulukazi maphakathi naseningizimu yenhlonhlo.
Leli zinga lokushisa laqala ngoJuni 27, 2015 futhi laphela ngoJulayi 22 ngawo lowo nyaka. Ngaleso sikhathi, usuku olwalushisa kakhulu kwakungu-6 Julayi lapho kwakukhona izinga lokushisa elijwayelekile lama-37 degrees Celsius. NgoJulayi 15 kwaba nesibalo esikhulu kunazo zonke sezifundazwe ezithintwe yilowo moya wokushisa, safinyelela kuma-30. ubude besikhathi.
Igagasi lokushisa elidumile lanyakenye lalisho ukuthi izifundazwe eziningi zesayensi yaseSpain zahlushwa amazinga okushisa aminyanisa ngempela izinsuku eziningi zilandelana. Leli qiniso kungenzeka ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu kanye nokufudumala kwembulunga yonke okubhekene nayo umhlaba wonke. Kodwa-ke, kwakukhona izindawo zaseSpain lapho ukushisa kwakuzwakala khona kancane, njengoba kwenzeka eGalicia, e-Asturias naseBasque Country.
Kuzofanele silinde kuze kufike ihlobo lonke ukuze sazi ukuthi kukhona yini amanye amaza okushisa nokuthi ahlala isikhathi esingakanani. Ngokusho kochwepheshe besimo sezulu, amazinga okushisa abhekene nayo yonke iSpain ajwayelekile ngesikhathi sehlobo, ngakho-ke kufanele uzihlomise ngokubekezela futhi ulethe ukushisa ngendlela engcono kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi okushisa » Bekuyini ukushisa okukhulu kakhulu eSpain?